Wararka Maanta: Isniin, Jan 24, 2022-Somaliland oo sheegtay in ay joojinayso wahadaladii u socday dowlada Soomaaliya
Wasiir Kayd oo waraysi gaar ah siiyay idaacada VOA Somali, ayaa sheegay in wadahaladadii miro-dhal yeelan waayeen ayna joojinayaan.
"Wadahaladu waxay soo bilaabmeen 2012, ilaa hadana wax miro-dhal ah may yeelan, shirarkii kala duwanaa ee waddamada kala duwan ka dhacay, waanu joojinaynaa wadahalada madaama oo qalada Soomaaliya anay diyaar u ahayn in laga gungaadho" ayuu yidhi wasiir Kayd.
Kayd ayaa dhinacakale sheegay in dowlada Soomaaliya anay wax aqoonsiga ah u ahayn Somaliland.
"Wax aqoonsi ah oo dowlada Soomaaliya ay Jamhuuriyada Somaliland u haysa ma jirto, hadaba 30 sanno ayaanu madax-bannaanayn" ayuu yidhi wasiir Kayd.
Wadahadalada u dhexeeya dowlada Soomaaliya iyo Somaliland oo bilowday sannadkii 2012, ayaan ilaa hada laga gaadhin horumar la taaban karo, xukuumada Somaliland-na waxay marar badan dowlada Soomaaliya ku eedaysay in ay ka baxday heshiisyadii shirarkii hore.